Fa maninona no maro loko ny ravina?
Fa maninona no mianjera avy amin'ny hazo ny ravina amin'ny fararano?
Kaum etwas fasziniert kider mehr als der ständige Wechsel der Jahreszeiten von Frühling zum Sommer und wieder in die kälteren Monate von Herbst und Winter. Umso schöner, wenn Sie als Eltern den Wechsel der Natur mit pädagogischem Material wie Ausmalbilder unterstützen und die Fantasie der kider beflügeln können. Denn jede Jahreszeit bringt ihren eigenen Zauber mit.
Viel Spaß beim bunte Ausmalen der Herbstbilder. Ein Klick auf den Link öffnet die Seite mit der jeweiligen Malvorlage zum Thema Herbst:
Herbst Bäume und Laub
Avelao hisidina ny papango fararano
Fa maninona no miova loko ny ravina rehefa fararano? Mazava ho azy fa ity fanontaniana ity dia manaraka mivantana ny antony ahintsanan'ny ravina avy amin'ny hazo amin'ny fararano. Ny antony mampamirapiratra ny ravina amin'ny fararano dia ny chlorophyll ao anaty ravina dia tapaka amin'ny fararano ary mifindra any amin'ny sampana, fotony ary faka (izay ilana azy maika amin'ny lohataona, ankoatry ny zavatra hafa).
Ny loko mavo izay hitanao matetika amin'ny fararano dia teo teo. Na izany aza, loko marefo mahery ny klôlôlôsy ka manaloka ireo loko hafa amin'ny lohataona sy fahavaratra - ny ravina dia miseho maitso amintsika fotsiny.
Fa maninona no miova loko ny ravina amin'ny fararano?
Hatramin'ny niandohan'ny vanim-potoana mangatsiaka ny klorofila, araka ny efa voalaza tetsy ambony, dia miseho miloko amin'ny fararano ny ravina, dia ireo loko nopotserina teo aloha.
Ahoana ny amin'ny loko mena amin'ny ravina miovaova?
Mifanohitra amin'ny loko mavo, ny loko mena dia vaovao tanteraka amin'ny fararano. Izy io dia fiarovana ireo anzima manan-danja izay tompon'andraikitra amin'ny fanesorana ny klorofila. Ka maninona ny ravina no miova loko amin'ny fararano dia misy ifandraisany amin'ny klorofila. Koa satria ny anzima noforonin'ny hazo dia mora tohina amin'ny hazavana, dia mampiasa loko mena ilay hazo ka miaro ireo zavatra ilaina.
Mandritra izany fotoana izany, ny loko mena dia miaro antsika amin'ny areti-bibikely koa. Matetika izy ireo no mametraka ny atodin'izy ireo amin'ny hazo amin'ny fararano mba hahafahan'ireo olitra misakafo ireo tanora maniry amin'ny lohataona. Miahiahy ny mpikaroka fa ny hazo salama dia mamokatra mena mahery tokoa amin'ny fararano ka mitady hazo malemy kokoa ireo bibikely.
Na izany aza, mbola tsy folo taona ity famoahana lahatsoratra ity. Mety misy antony maromaro mahatonga ny ravina hiova loko amin'ny fararano - fa ny fahavaratra Indiana dia tsara tarehy tokoa!
Mora ny mahatakatra ny antony mahatonga ny hazo very ravina. Ny metabolisma-n'ny hazo dia mifindra amin'ny mpandoro lamosina, raha tsy izany, mba hivelomana tsara amin'ny ririnina mangatsiaka.
Ny tena olana dia ny tsy fisian'ny rano. Matetika mangatsiaka ny tany amin'ny ririnina, dia tsy afaka mandray rano ampy ny hazo. Saingy izany indrindra no ilain'izy ireo amin'ny fotosintesis ary amin'ny famokarana otrikaina. Koa satria tsy azo atao izany, ny hazo dia manao fandaharam-pialan-tsasatra mba hialana sasatra, ary hanipy ny bala rehetra. Raha tsy nandatsaka ny raviny tamin'ny fararano ny hazo iray dia saika ho tafaporitsaka izy ireo!
Fa maninona no ravina ihany no latsaka avy amin'ny hazo amin'ny fararano fa tsy fanjaitra?
Mifanohitra amin'ireo hazo mihintsana, izay very ravina amin'ny fararano, ny conifers dia mifanaraka tsara amin'ny hatsiaka sy ny tsy fisian'ny rano. Ireo fanjaitra koa dia manana savoka tena tsara izay manohitra ny etona. Ho fanampin'izay, tokony ho fantatrao ny toetr'ireo fanjaitra raha oharina amin'ny ravina.
Ny fanjaitra dia manana velarana kely kokoa noho izany, izay kely kokoa ny rano alaina, ary ny fanjaitra avy amin'ny fir, spruce sns dia manana endrika manokana miantoka ny fifanakalozana solika azo antenaina. Raha ny fanazavana, dia mety ho folo taona ny fanjaitra vao milatsaka.
Ny konifera dia matetika no hita ao amin'ny sampahony amin'ny faritra izay lava mangatsiaka lavitra noho ny eto, ka tsy maintsy "tsy ilaina" intsony izy ireo mandritra ny enim-bolana. Ireo hazo mihintsan-dravina kosa dia very ravina amin'ny fararano ary tsy maintsy miaina mitanjaka mandritra ny telo volana.
Pejy fizaran-taona fararano
Fandokoana fararano | fizaran-taona
Blower ravina pejy fandoko | Vanim-potoanan'ny fararano
Ravina fararano ravina | Vanim-potoanan'ny fararano
Pejy fandokoana vanin-taona fahavaratra
Pejy fandokoana vanim-potoana ririnina
Pejy fandokoana fizaran-taona